Ganacsatadda Beenyaddu Hagar-Daamoyinkay Qaranka ku Hayaan "Deeq Bixiye M/weynaha u Magan Tagtay oo Haddana La-Xidhay"
Saturday March 10, 2018 - 04:23:11 in Wararka by Super Admin
Waa sheeko qaranka iyo madaxweynaha Ceeb ku ah, hadaan wax laga qabana, dawladda maraykanka iyo safiirkeeda Nairobi kala hadli doono xukumaddan tabcaanka ah. Dr. Anjanette Decarlo . oo deeg u waday gobalka Sanaag ayaa waxaa looga soo qafaashay hotel-ka Mansoor, sifo sharciga aan waafaqsanayn. Iyadoo visa sharci ah kusoo gashay dalka. Salaasadii ciidan boolis ah oo taliyaha boolisku soo amray xidheen, waxayna damceen in ay dalka ka mastaafuriyaan balse waxaa ka diiday taliyaha immigration-ka oo yidhi waxaad gabadhan kusoo xidheen waa sifo sharci daro ah, wax danbi ahna kuma haysaan. 12 hours markay xidhnayd ayaa la sii daayey.
Salaasadii galinkii hore ayey madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland la kulantay, markaasay u sheegtay in ay caawimo u waddo gobalka Sanaag, magaaladda Ceerigabo sida:
1.Hospital ku baxayso $2.5 Million
2.School Boarding ah
3.43km wado ah oo ka bilaabmaysa ceerigabo ilaa buurta Calmadaw
4.Ceelal , warehouses, iyo lacag dhiiri galina
Waxay cadho galisay markii ay Dr. Anjenette Decarlo. tidhi waxaan maal galinayaa community Burta calmadaw, wasiirka arimaha gudaha iyo beeshiisa oo dagaal dhaqaale kula jiray beesha degaankan degta oo xaga Beenyadda ah,xukumaddii siilanyo-na wakaalad kooto ah u samaysay. maadama, beenyadda ugu tayadda wacan ka baxdo agaasi beesha kale oo manta ku toostay.
M/weynuhu inanta markuu u balan qaaday inuu sugayo amaankedda ayaa haddan waxaa . sifo sharci daro ah loogu xidhay shalay galinkii hore Gobalka Burco labo jeer. Waxaana xidhay police-ka . markii horena waxaa xidhay taliyaha police-ka. Sida taliyaha immigration-ku u sheegay gabadhan.
Propaganda iyo hadiidaa shirkaddaha beenyadda qarank ku hayaan, waa mid hoojinaysa sharaf maamulka jira. Wasaaraddii ganacsiga oo iyana cabasho badani ka jirto markay group-ganacsatadda beenyadda ahi ,wasaaraddii ayey laalush ku waaleen, waxayna sababtay in xilal waaxda beenyadda kooto loogu xidho koox ganacsato ah.
Wasaaraddii arimaha gudaha oo iyana ku dhex milintay, murankan beenyadda ee merxaladda adag maraya.waxani maaha wax aanu uga fadhinay xukumadda cusubi, in ay kolba ganacsato isku dulqabsato , xalna u waydo edab darooyinka noocan ah ee soo noqnoqonaya. Sharciga iyo akhlaaqda dawladda waa in ay dhawraan dadka waxan samaynaya.
Waxaana ayaan darobulshadda ku ah dadka caawimooyinka wadda in la rabsho lana khalkhal galiyo aminigooda. Lana ixtiraamo , masuuliyadna la iska saaro dadka ajanbiga ah ee dalka yimaadda.
Maganta madaxweynahu damaanad qaaday oo la ilaalin waayona waxay leedahay cawaaqib xumo. Waxayna galaafan doontaa dad badan, sida sharcigu dhigayo.
Dr. Anjanette Decarlo oo galabta ka dhooftay gagida diyaaraddaha ee cigaal internation airport ayaa waxaa interview ka qaaday Star Tv.